The Essence: ငြိမ်းအေးသော ဘ၀၊၊ ၊၊
ငြိမ်းအေးသော ဘ၀၊၊ ၊၊
စာမေးပွဲအတွင်း တစ်လလုံးလုံး စာမရေးဖြစ်ခဲ့၊ အခု စာမေးပွဲပြီးသွားတော့ ဘာကစရေးရမှန်းမသိ တော့ဘူး ဖြစ်နေသည်၊၊ နိုင်ငံတကာမှ အသိမိတ်ဆွေများကလည်း အင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပါးရေးဖို့ တိုက်တွန်းထားသည်၊၊ လိုက်လျောသည့်အနေနဲ့ ရေးဖို့ကြိုးစားကြည့်တာ၊ နောင်ပြန်တွေးမိတာက “အလင်းစက်”ဆိုက်မှာ စာဖတ်သူတွေက မြန်မာတွေများတာဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးက တကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါ့မလား တွေးမိပြန်တော့ စာကရှေ့ဆက်မရပြန်၊၊
ဒါနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆိုက်တွေကို ဟိုသည်လိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတာ သုံးလေးရက်ရှိပြီ၊၊ ဘာကစရေး လို့ ရေးရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့ ကိုးလပိုင်းတုန်းက သီရိလင်္ကာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ စာအုပ်ဆိုင်များအားလုံး စုစည်းပြီးကျင်းပသည့် စာအုပ်ဈေးပွဲတော်မှာ ၀ယ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကို လှန်လှောကြည့်ဖြစ်လိုက်သည်၊၊
“ရေဆာနေသူ ရေတွင်းထဲပြုပ်ကျ”ဆိုသလိုပါပဲ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ စာလေးတစ်ကြောင်းကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတယ်၊၊ စာကြောင်းလေးရဲ့ဆိုလိုချက်က “အေးအေးလေးနေချင်ရင် အောင်မြင်အောင် လုပ်”တဲ့၊၊ ပြင်ပမှာလဲ အေးအေးလေးနေချင်တယ်လို့ ပြောနေသူတွေများလှတာမို့ ဒါနဲ့ပတ် သက်ပြီး ရေးလိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ အေးအေးလေး နေချင်သူများအတွက် စာတမ်းအမည်ကို “ငြိမ်းအေးသော ဘ၀”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်မိပါသည်၊၊
ဒီစာတမ်းလေးထဲမှာ အေးအေးလေးနေချင်သူများ ဘယ်လိုနည်းများနဲ့ အေးအေးနေခွင့်ရနိုင်တယ်၊ ဘာတွေ အလျင်ပြည့်စုံထားမှ အေးအေးလေး၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘ၀နဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတာကို အလင်းစက် အရှင်ရဲ့ အမြင်နှင့်အတူ စာပေအဆိုများနှင့်တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါသည်၊၊ အေးအေးနေချင်ပါသည်ဆိုတတ် သူများမှာ တကယ်ပဲ အေးအေးနေချင်တဲ့ စိတ်ရှိ၊ မရှိနှင့်၊ တာဝန်တွေကိုရှောင်ချင်လို့ အေးအေးနေ ချင်တယ်ပြောတာလားစတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
ဘ၀တစ်ခုတွင် “အသက်သာတစ်ရာမနေရချင် ရှိလိမ့်မည်၊ ပြဿနာကတော့ တစ်ရာထက် မ နည်း သေခြာပေါက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတတ်သည်”ဟု မြန်မာအဆိုရှိသည်၊၊ မှန်သည်၊ လူတို့၏ဘ၀တွင် ပြဿ နာပေါင်းထောင်သောင်းကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသည်၊၊ မိသားစုပြဿနာများ၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ လူမှုရေး ပြဿနာများ၊ စားဝတ်နေရေးပြဿနာများ၊ ချစ်ရေးချစ်ရာ ပြဿနာများ၊ ပေါင်းသင်းဆက် ဆံရေးပြဿနာများ၊ ပညာရေးပြဿနာများ စသည်စသည်ပြဿနာတွေက မငြိမ်းချမ်းသေးသည့် လူသားတို့၏ဘ၀ကို အစဉ်နှိပ်စက်ဖိ အားပေးနေတော့သည်၊၊
ဤမျှများပြားရှုပ်ထွေးသည့် ပြဿနာများအကြားတွင် လူသားသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများနှင့်အတူ ဘ၀ကိုပင်ငြီးငွေ့လာတတ်ကြရသည်၊၊ “မချမ်းသာချင်နေ ပါစေတော့ အေးအေးလေးလေးသာနေချင်တော့သည်”ဟု များစွာသောလူတို့ ငြီးတွားတတ်ကြသည် မှာ ဘ၀ ငြိမ်းချမ်းမှုကို မရရှိ၍ဖြစ်ရသည်၊၊ သို့ဆိုလျင် ဘ၀တစ်ခုငြိမ်းချမ်းမှု၊ အေးဆေးညင်သာသည့် ဘ၀တစ်ခုကို မည်သို့သောနည်းများဖြင့် ရရှိနိုင်မည်နည်းဟု အဖြေရှာကြည့်သင့်သည်၊၊
တကယ်တော့ အေးအေးလေးနေချင်လို့ နေခွင့်မရသည်မှာ လူ့ဘ၀၏အဓိပ္ပါယ်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်တော့သည်၊၊ ငြိမ်းအေး သည့်ဘ၀၊ အေးအေးလေးနေလို့ရသည့်ဘ၀အဆင့်ဟူသည်ကို ဘ၀တစ်ခုတွင် ပြည့် စုံသင့်သည့်အခြေခံ အချက်အလက်များ ပြီးပြည့်စုံပြီးမှရရှိနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်မိသည်၊၊ ဤနေရာတွင် အေးအေးလေးနေချင်သည်ဆိုတိုင်း တကယ်ငြိမ်းအေးသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလားဟု မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ် လည်း မေးခွန်းထုတ်သင့်သည်၊၊
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ချို့လူတို့သည် ထမ်းဆောင်ရမည့် ဘ၀တာဝန်များ၊ လူသားတာဝန်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် တာဝန်များကို ရှောင်လွှဲလို၊ ပြင်းရိသဖြင့် အေးအေးနေချင်သည်ဟုဆိုသော လူပြင်း၊ လူ့ရေသာခိုများကို လည်း နေ့စဉ်ဘ၀တွင် များစွာတွေ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်၊၊ ဤသို့သောသူများကို ဘ၀စည်းစိမ်တစ်ခုသာ အလကား မတ်တင်းဖြင့် ပေးကမ်းကြည့်လိုက်ပါက “အေးအေးနေချင်သည် ဆိုသောစကားကို” ပြောတော့မည်မဟုတ် သည့်အပြင် သူကိုယ်တိုင်ပင်ပူလောင်မှု ပြဿနာများကိုဖန် တီးလုပ်ကိုင် တတ်တော့ သည်၊၊
လူ့အဖွဲ့အစည်း လူပတ်ဝန်းကျင်တွင် အထက်ပါလူတန်းစားများစွာကို စာဖတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် တွေ့ရဖူးမည် ဖြစ်သည်၊၊ ဘ၀တစ်ခုတွင် အေးငြိမ်းမှုမရ၊ အေးအေးမနေရသည်မှာ ပြည့်စုံသင့်သည်တို့ မပြည့်စုံသောကြောင့်သာ ဖြစ်ရသည်၊၊ သို့ဆိုလျင် လူ့ဘ၀တစ်ခု ငြိမ်းအေးရန်၊ အေးငြိမ်းသော ဘ၀ တစ်ခုကိုရရှိရင် လို့သည့်ပြည့်စုံမှုများကို အဖြေရှာရတော့မည်၊၊
အရှင်၏အမြင်အရ လူတစ်ယောက်၊ ဘ၀တွင်အေးအေးသက်သာ နေခွင့်ရဖို့ရန် ပြည့်စုံမှုငါးခုမျှရှိလျင် လုံလောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်၊၊ မနုဿဗေဒပညာရှင်များကလည်း လူသား၏ဘ၀တည်ငြိမ်မှုအတွက် အခြေခံလိုချက်များစွာ ကို ဖော်ထုတ်တင်ပြကြရာတွင် အရှင်ယ္ခုတင်ပြမည့်အခြေခံ ပြည့်စုံမှုလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားသည် ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်၊၊ စာဖတ်သူအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ဘ၀ မငြိမ်းချမ်းသည်မှာ ရှိသင့်သည့်ပြည့်စုံမှုမရှိသေး၍ ဆိုသည်ကိုလေ့လာရရှိမည် ဖြစ်သည်၊၊
ငါ့ဘ၀မငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ၊ “ဟို့လူကြောင့်ပေါ့၊ သည်လူ့ကြောင့်ပေါ့”ဟု တရားခံရှာနေတတ်သည်မှာ လူ့သဘာဝဖြစ်သည်၊ အမှန်မှာ မိမိဘ၀မငြိမ်းချမ်းသည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံသင့်သည်များကို ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားမထားသောကြောင့်သာ ဖြစ်ရသည်ကို မေ့လျော့တတ်ကြသည်၊၊ လူဘ၀တစ်ခု အေးဆေးသက်သာ၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခွင့်ရရန် ပြည့်စုံမှုငါးမျိုးကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရသည်၊၊
(၅) ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံမှု၊ တို့ဖြစ်ကြသည်၊၊
“ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး”ဟု အဆိုရှိသည်၊ လူဘ၀တွင် ကျန်းမာနေလျင်ပင် လုပ်ချင်သည်များ၊ ဖြစ်လိုသည်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ကြိုးစားရယူခွင့် ရရှိနိုင်သည်၊၊ ကျန်းမာရေးမပြည့်စုံက ကြိုးစား ခွင့်များအားလုံးနှင့် ခံစားခွင့်များအားလုံးပင် ဆုံးရှုံးရတော့သည်၊၊ ကျန်းရေးပြည့်စုံခြင်းကို အသက်ရှင် ခွင့်ရနေခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်၊ လူသည်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေခြင်းသည်ပင် အကောင်းဆုံးလာဘ်တစ်ခုကို ရရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင် တို့က ဖော်ပြ၊ ပြောဆိုကြသည်၊၊ မကျန်းမာသူသည် ဘ၀တွင် စိတ်အဆင်းရဲဆုံးလူဖြစ်သည်၊ ငြိမ်းအေးသည့် ဘ၀တစ်ခု၏အရသာကိုလည်း အများဆုံး ဆုံးရှုံးနေသူပင်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးပြည့်စုံခြင်းကို ငြိမ်းအေးသော ဘ၀တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သည့်အ ခြေခံလိုအပ်ချက်ဟု ဆိုလိုက်ရပါသည်၊၊
ကျန်းမာရေးပြည့်စုံပြီး အသက်ရှည်နေသော်လည်း သူတစ်ပါးအိမ်၊ သူတစ်ပါးအထံတွင် ကပ်ရပ်နေရ သည်ဆို ကလည်း ဘ၀သည်ငြိမ်းအေးနိုင်မည် မဟုတ်ချေ၊ စီးပွားရေးအမည်ခံ ငွေကြေးချမ်းသာမှုကို လောကတွင် ဒုတိယ အကောင်းဆုံးနှင့်၊ သြဇာအကြီးဆုံးအဖြစ် လူတို့သတ်မှတ်ကြသည်၊၊ မိဘနှင့် သားသမီးပင်ဖြစ်စေကာမူ စီးပွားရေး ဟူသည် မိမိလက်ဝယ်တွင် ရှိနေသည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊၊ ငွေသည် လူ၏စိတ်နှင့် အကျင့်စရိုက်ကို အများဆုံး ပြောင်းလွဲစေသော အရာဖြစ်ရကား ငွေနှင့် ပတ်သက်လျင် ယုံကြည်စိတ်ချရသူ အလွန်ပင် ရှားလှသည်၊ ထို့ကြောင့်ပင် “သားသမီးယုံ၊ စုံလုံးကန်း၊ ဟူ၍လည်းကောင်း၊၊ ကျွန်ယုံ၊ တစ်ဖတ်ကန်း၊ ဟူ၍လည်းကောင်း” ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုရိုး စကားများထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်၊၊
မိမိကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်သည့် စီးပွားဥစ္စာမရှိရကား သူတစ်ပါးအထံတွင် အလုပ် လုပ်နေရမှု၊ သူတစ် ပါးနေအိမ်တွင် မှီခိုနေရမှု၊ စသည်များသည် ဘ၀တစ်ခုတွင်အဆင်းရဲဆုံးသော ဘ၀အခြေအနေများ ဖြစ်သည်၊ တဲအိမ်လေးဖြစ်စေကာမူ မိမိပိုင်သာဖြစ်နေပါက ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိဖြစ်နေတတ်သည်၊၊ ပါဠိစာပေတွင် “မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ မိမိသည် အမှီခိုခံဖြစ်လျင် ချမ်းသာရသည်၊ မိမိက မှီသူဖြစ်နေလျင်ကား ဆင်းရဲရသည်”သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုထားသည်ကို လေ့လာရသည်၊၊
မိမိလက်ဝယ်တွင် ပြည့်စုံသည့်ငွေကြေး၊ စီးပွားဥစ္စာရရှိထားလျင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မိမိဘက်သို့ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်သည့်အပြင်၊ စားရေး၊ ၀တ်ရေး၊ နေရေးများအတွက်လည်း ပူပင်မှုမရှိတော့ရကား၊ လိုအပ် သည့်ငွေ ကြေး၊ာစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံမှုကို ဘ၀တစ်ခုတွင် ငြိမ်းအေးစွာနေနိုင်ရေးအတွက် ဒုတိယပြည့်စုံမှုဟု ဆိုရပါသည်၊၊ ထို့ကြောင့် ဘ၀တွင်အေးဆေးသက်သာ၊ ငြိမ်းအေးသောဘ၀တစ်ကို တည်ဆောက် နိုင်စေရန် စီးပွားဥစ္စာကြွယ်ဝမှုကိုလည်း မဖြစ်မနေကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး ပြည့်စုံနေစေကာမူ လူမှုရေးဘက်တွင် ညံ့ဖျင်းနေပါကလည်း အများ၏အတင်း အဖျင်း၊ အမနာပ တီးတိုးစကားများ၊ ဝေဖန်၊ ပုပ်ခပ်ကဲ့ရဲ့၊ ရှုပ်ချမှုများ၊ ထိုးနှက်၊ တိုက်ခိုက်မှုများအောက် တွင် နေရတတ်သောကြောင့် ဘ၀တွင်ငြိမ်းအေးစွာနေချင်ပေသည့် မနေရတတ်ပြန်ပေ၊ ထို့ကြောင့် ယင်းအခြေအနေ ဆိုးများမှ ကင်းဝေးစေရန် လူမှုရေးပြည့်စုံမှုသည်လည်း အထူးလိုအပ်လှပါ သည်၊၊
တဖန် လူမှုရေးပြည့်စုံမှုသည် ဘ၀တစ်ခု၏တိုးတက်မှု အဓိကအထောက်အပံ့ဖြစ်နေရကား မရှိမဖြစ် အထူးအရေး ပါသည့် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်၊၊ လူမှုရေးပြည့်စုံမှုဆိုရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေး၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကောင်း ရရှိရေး၊ မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးအားလုံးပင် အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်၊၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကောင်းမရှိလျင် အကြံညာဏ်ကောင်းကို မရရှိတတ်ပေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကို မရရှိပြန်ကလည်း ငြိမ်းအေးစွာမနေရတတ်ပေ၊ မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေလည်လျင်လည်း အေးအေးနေခွင့်ကို မမျှော်လင့်နိုင်ချေ၊၊
ပါဠိစာပေ၊ မြန်မာစာပေနှင့် အင်္ဂလိပ်စာပေများတွင် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ အရေးပါအရာရောက်ပုံကို များစွာ ပင်ဖော်ပြထားသည်၊၊ ထို့ကြောင့် လူမှုရေးပြည့်စုံမှုသည် ဘ၀တစ်ခုအတွင် အေးအေးသက်သာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်ရေးအတွက် လွန်စာလိုအပ်သော ပြည့်စုံမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါသည်၊၊
ဘ၀တစ်ခုတွင် ပညာမပါဘဲ အသက်ရှင်ရခြင်းသည် တိရစ္ဆာန်တို့၏အသက်ရှင်မှုနှင့် မည်သို့မျှထူးခြားမှု မရှိဟု မှတ်ရမည်၊၊ မှန်သည်၊၊ အကျိုး-အကြောင်း၊ အဆိုး-အကောင်း၊ အမှား-အမှန်ကို စနစ်တကျ ဝေဖန်သိတတ်သော ပညာမရှိမူ၍ ထုံထုံထိုင်းထိုင်း၊ အအ နနအသက်ရှင်နေရခြင်းကို လူသားတစ်ဦး၏ အသက် ရှင်နေရခြင်းဟု ခေါ်ဆိုရန်မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ပေ၊၊ ထိုကဲ့သို့သော အသက်ရှင်မှုများကို ပါဠိစာပေတွင် လူတိရစ္ဆာန်၊ လူ့ပြိတ္တာတို့၏ အသက်ရှင်နေမှုဟူ၍ ပြတ်သားစွာဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်၊၊
ပညာဟူသည် လူသား၏တိရစ္ဆာန်တို့နှင့် တစ်ခုတည်းသော ကွာခြားမှုဖြစ်ရကား လူဟူ၍၀န်ခံလိုသူတိုင်းပင် ပညာတတ်ရပေလိမ့်မည်၊၊ ပညာမတတ်သူကို မျက်စေ့ကန်းနေသူနှင့် တူသည်ဟုလည်း ဆိုထားပြန်ရကား ပညာသည် လူသားဖြစ်ကြောင်း၏ ခိုင်မာသောပြယုဂ်တစ်ခုဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်၊၊ အသိပညာမပါဘဲ ပြုသမျှ၊ ပြောသမျှ၊ ကြံစီတွေးတောသမျှသည်လည်း အမှားချည်းသာဖြစ်သောကြောင့် အကျိုးရလာဘ်များသည်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ငြိမ်းအေးမှုကို ယူဆောင်လာမည်မဟုတ်သည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်၊၊
ကမ္ဘာ့သမိုင်း ရာဇ၀င်များတွင် ပညာမဲ့သူတို့၏လုပ်ရပ်များကြောင့် ကမ္ဘာ့လူသားတို့ မငြိမ်းချမ်းရပုံ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက် ရပုံများစွာကို လေ့လာ၍ရနိုင်သည်၊၊ အသိပညာမဲ့ခြင်းသည် မိမိဘ၀နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဘ၀များစွာကိုပင် အကျိုး ယုတ်စေသည်၊၊ ထို့ကြောင့်ပင် ပညာကို ဘာသာတိုင်းက အရေးအပါဆုံးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟု ဘာသာတရား၏အရေးအပါဆုံးကျင့်စဉ်နှင့် အကျိုးများ အဖြစ်ထားရှိရာ ပညာသည် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်၊၊ မြတ်စွာဘုရားသည်ပင်လျင် ပညာပါရမီကိုနောက်ဆုံး ဖြည့်ကျင့်ပြည့်စုံပြီးမှ သဗ္ဗေညုတာ-ဘုရားစစ်စစ် ဖြစ်လာရပါသည်၊၊
ဆိုခဲ့ပြီး အကြောင်းများကြောင့် ငြိမ်းအေးစွာ ဘ၀တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုလျင် ပညာကိုရရှိအောင် ကြိုးစားရပါမည်၊၊ ပညာမတတ်ဘဲ၊ အသိပညာမရှိဘဲနှင့်ကား အေးအေးနေထိုင်ခွင့်နှင့် ငြိမ်းအေးသော ဘ၀ကို မရရှိနိုင်ချေ၊ ပြည့်စုံသည့် ပညာကိုရရှိအောင်ကြိုးစားမှုမရှိဘဲ အေးအေးသက်သာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုပါမူ “ရေကန်ထဲမှ လ-ရိပ်ကိုဖန်းဆုပ်လို သူနှင့်သာ တူတော့မည်” ဖြစ်သည်၊၊
မေထုန်မှီ၊ အိပ်၊ စားလို့၊
လူသားတစ်ယောက်၏ ဘ၀တွင် ပြည့်စုံသင့်၊ ပြည့်စုံရမည့်အင်္ဂါရပ်များအနက် နောက်ဆုံးနှင့်အရေး အကြီးဆုံး ပြည့်စုံမှုမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံမှု ဖြစ်သည်၊၊ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ဘာသာတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းတွင် ရှိကြသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်၊၊
သို့သော် သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးအလိုက်၊ ဘာသာတရားအလိုက် ကိုယ်ကျင့်တရားများမှာ အခြားမတူညီသည့် ဘာသာခြားများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်၊၊ ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံမှုဆိုရာ တွင် မိမိဘ၀တိုးတက်မှု ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေ၊ ငြိမ်းအေး၊ တိုးတက်စေသော ကိုယ်ကျင့်တရားများကိုသာ ဆိုလိုပါသည်၊၊
ဥပမာအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အချို့သောသီလဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် အခြားဘာသာဝင်များ အတွက် မလိုလားအပ်သည့် တားဆီးချုပ်ချယ်မှုဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊၊ ခရာစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူစ သည့်ဘာသာတရားမျာ၏ သီလဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားများသည်လည်း အလားတူဖြစ်ပါသည်၊၊ အများလက်ခံသိရှိထားပြီးသည့်အတိုင်း မူစလင်ဘာသာဝင်တို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများမှာ ကမ္ဘာလူ သားများကို ကောင်းကောင်းပင်အတိ ဒုက္ခပေးသည့် အတွက် အရှင်တင်ပြလိုသော ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံမှုတွင် ထိုကဲ့သို့ကြမ်းတမ်းသော ဘာသာရေးကိုယ်ကျင့် တရားမျိုး မပါဝင်ပါ၊၊
လူသားတိုင်းသည် ဘာသာအယူအဆ ကွဲပြားခွင့်ရှိသည်၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်၊ အတွေးအခေါ်၊ အလုပ် အကိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊၊ သို့သော် မိမိ၏လွတ်လပ်မှုသည် သူတစ်ပါးအတွက် အနှောက် အယှက်မဖြစ်ရန်၊ သူတစ်ပါးတိုးတက်မှုကို မထိခိုက်စေရန်ကား အထူး ပင်လိုအပ်သည်၊၊
တင်ပြပြီးခဲ့သည်များအတိုင်း မိမိဘ၀ကို အမှန်တိုးတက်စေ၊ ငြိမ်းချမ်းအေးမြစေပြီး၊ လောကလူများ တိုးတက်မှု၊ အေးငြိမ်းချမ်းသာ နေထိုင်မှုကိုလည်း အားပေးသောကိုယ်ကျင့်တရားမျိုး လူတစ်ဦးတွင် ပြည့်စုံပြီဆိုလျင် ဘ၀တွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အေးငြိမ်းမှုကိုအသေအခြာရရှိမည် အမှန်ဖြစ်ပါသည်၊၊ ထို့အကြောင်းများကြောင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံမှုသည် လူသားတစ်ဦး၏ဘ၀ အေးအေးသက်သာ နေထိုင်ခွင့်ရမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် လိုအပ်သည့်ပြည့်စုံမှုတစ်ခုဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊
ဤတွင် အရှင်တင်ပြလိုသော လူတစ်ဦး၏ဘ၀ အေးဆေးသက်သာစွာ နေခွင့်ရမှု၊ ငြိမ်း ချမ်းအေးမြစွာ နေခွင့်ရမှု အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါသည်၊၊ ရေးသားတင်ပြမှုသည် အရှင်၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေး အခေါ်မျှဖြစ်သည့်အတွက် လုံးဝပြည့်စုံသည်ဟုကား မဆိုလိုပါ၊ စာဖတ်သူများအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များ ဖြင့် သုံးသပ်ရယူပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဘ၀တစ်ခုတွင် ငြိမ်းချမ်းအေးမြစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဟောပြောညွန်ပြချက် တစ်ခုကို “သုဗြဟ္မသုတ်တွင် လေ့လာရပါသည်၊၊ သုဗြဟ္မသုတ်လေ့လာချက်ကို ဆက်လက်၍တင်ပြ မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ “အလင်းစက်”စာဖတ်သူများ ငြိမ်းချမ်းအေးမြသည့်ဘ၀ကို ပြည့်စုံရမည့်အခြေခံ အချက်အလက် ငါးမျိုးကိုကြိုး စားရယူနိုင်၍၊ ဘ၀တွင်ငြိမ်းအေးသူများဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျက် စာတမ်းကို အဆုံးသတ်အပ်ပါသည်၊၊
Posted by အလင်း စက် at 8:34 PM
Teresa Lwin December 7, 2012 at 6:39 AM
Noted with thanks phayar.
Looking forward to your new posts as well.
Teresa Lwin December 7, 2012 at 6:40 AM
အနာဂါရိက ဓမ္မပါလ၊၊ ၊၊